အမှိုက်အိတ်ထဲကို မလွှတ်ပစ်သင့်တဲ့ အစားအစာ အစိတ်အပိုင်း ၇ မျိုး - For her Myanmar
လွှတ်ပစ်မိနေတာတွေကမှ တကယ့် ဗီတာမင်တွေ
အမှိုက်အိတ်ထဲကို မလွှတ်ပစ်ရတဲ့ အစားအစာအစိတ်အပိုင်း ဆိုတော့ ဘာများဖြစ်မလဲ ယောင်းတို့ သိချင်ကြတယ်ဟုတ်။ အိမွန်တို့တွေက လိမ္မော်သီးစားပြီးရင် လိမ္မော်ခွံကို လွှတ်ပစ်တယ် ၊ ကြက်သွန်နီနွှာပြီးရင် အခွံကို လွှတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါတွေကအမြဲတမ်း အလေ့အထလို ဖြစ်နေပြီ။ ဆိုတော့ကား အချိန်မနှောင်းခင်လေး သိသွားရအောင် ဘယ်လိုအစိတ်အပိုင်းတွေက အမှိုက်ဆိုပြီး လွှတ်ပစ်လိုက်ဖို့ မသင့်တော်ဘူး ဆိုတာကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးကို စားတဲ့အခါ အထဲက အသားကိုပဲစားပြီး နူးညံ့တဲ့ငှက်ပျောခွံကိုတော့ လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါက မဟာအမှားပါပဲ။ ငှက်ပျောသီးမှာက ပျော်ရွှင်မှုဟော်မှုန်း ဆီရိုတိုနင် (serotonin) ကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပုံမှန်ဖြစ်စေတဲ့ ထရိုင်ပတိုဖန် (tryptophan) ပါဝင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး smoothies ထဲကို ငှက်ပျောခွံအမှည့်ပါ ရောဖျော်သောက်ပေးလို့ရသလို ငှက်ပျောမုန့်ဖုတ်တဲ့အခါ အခွံပါထည့်ပေးလို့ ရပါတယ် ယောင်းရေ။
Related article >>> ဆီးလမ်း​ကြောင်းမကောင်းသူတွေ ဘယ်လိုအစားအစာမျိုး ရွေးစားကြမလဲ?
ပူနေတဲ့ ရာသီမှာ ဖရဲသီးလေးများ စားရမယ်ဆိုရင် ရင်ကို အေးခနဲ ဖြစ်သွားတာပဲ။ ဖရဲသီးအသား ရဲရဲလေးကို ဖျော်ရည်လုပ်သောက်ပြီး မြိန်ရေရှက်ရေ ဒီတိုင်းစားကြပေမဲ့ အခွံနဲ့ အစေ့ကိုတော့ ဘယ်သူမှ အဖတ်မလုပ်ဘူးရယ်။ တကယ်တော့ ဖရဲသီးအခွံ အစိမ်းရောင်အောက်က အဖြူရောင်အတွင်းသားမှာ အမိုင်နိုအက်ဆစ် စီထရူလိုင်း (citrulline) ပါဝင်လို့ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဖရဲသီးအစေ့ကတော့ မိန်းကလေးအများစု ကြိုက်တဲ့ ကွာစိလှော် ဖြစ်သွားပြီး အပျော်စားလို့ ရတာပေါ့ ယောင်းရေ။
နာနတ်သီးစားတဲ့အခါ အူတိုင်ကို ယောင်ပြီး လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့ ယောင်းရေ။ နာနတ်သီးအူတိုင်ထဲမှာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်မြောက်မြားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ နာနတ်သီးတစ်လုံးမှာက ပရိုတိန်းချေဖျက်ပေးတဲ့အင်ဇိုင်း (bromelain) ပါဝင်တဲ့အတွက် ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ သွေးခဲခြင်းကိုလည်း ကာကွယ် တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ နာနတ်သီးအူတိုင်ကို အတုံးလေးတွေ တုံးထားပြီး ရေထဲထည့်သောက်လို့ ရသလို နာနတ်သီး ထမင်းကြော်ထဲမှာလည်း ထည့်ကြော်စားလို့ ရပါတယ်။
Related Article>>>အိမ်ရှင်မတို့အတွက် အလုပ်သက်သာစေမယ့် ဖြတ်လမ်းနည်းများ
ကြက်သွန်နီအခွံကို လွှင့်ပစ်စရာ မလိုဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မယုံနိုင် ဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်။ ကြက်သွန်နီအခွံထဲမှာ ကွာစီတင် (quercetin) ဒြပ်ပေါင်းက များစွာပါဝင်နေလို့ ရောင်ရမ်းမှုကို တိုက်ထုတ်ပေးပြီး သွေးပေါင်ချိန် လျော့ကျစေပါတယ်။ စွပ်ပြုတ်လုပ်သောက်တဲ့အခါ ကြက်သွန်နီအသားရော အခွံပါ ရောချက်ပြီး စားခါနီးကျမှာ အခွံတွေကို ဖယ်ပြီးစားပေးရင် ဆေးဘက်ဝင်ပါသတဲ့ ယောင်းရေ။
ကီဝီသီးစားတဲ့အခါ မျက်နှာအငယ်ရဆုံးက အခွံပါပဲ။ အထဲက အသားကို ဇွန်းနဲ့ ခပ်စားပြီး အခွံကိုတော့ ဒီတိုင်းလွှတ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကီဝီခွံက လိမ္မော်ခွံတွေလို ဗီတာမင် C ဓာတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အခွံက ကြမ်းကြမ်းလေး ဖြစ်နေတာကို မကြိုက်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကီဝီသီးတစ်လုံးလုံးကို ထည့်ဖျော်ပြီး smoothie လုပ်သောက်လို့ ရပါတယ် ယောင်းရေ။
ပန်းဂေါ်ဖီစားတဲ့အခါ အပေါ်က ပွင့်ဖတ်လက်တံလေးတွေပဲ ဖြုတ်ပြီးစားကြပေမဲ့ အောက်ကရိုးတံကြီးကိုတော့ လွှတ်ပစ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ရိုးတံမှာ ရောင်ရမ်းမှုတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ sulforaphane ဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်ပြီး ဆဲလ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ သွေးကြောထဲမှာ အကျိတ်လုံးဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်တစ်ခါ ပန်းဂေါ်ဖီ ကြော်စားမယ်ဆိုရင် ရိုးတံလေးပါ ထည့်ကြော်ပါ ယောင်းရေ။
နံနံပင်ကိုတော့ ကြိုက်တဲ့သူရှိသလို မုန်းကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နံနံပင်စားရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ နံနံပင်အမြစ်တွေကိုပါ ကြိုက်သင့်ပါတယ် ယောင်းရေ။ အမြစ်မှာက အရွက်ထက်ကို ပရိုတိန်းဓာတ် ပိုများပါတယ်။ ပင်စည်မှာလည်း အာဟာရတန်ဖိုး တူတူရှိပြီး ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်ပေးသလို အရေပြားနဲ့ မျက်လုံးကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းမွန်စေပါသတဲ့ ယောင်းရေ။
ကဲ..အရင်တုန်းက မသိလို့ ယောင်မှားပြီး လွှတ်ပစ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုတော့ တန်ဖိုးထားပြီး အမြတ်တနိုး စားသုံးလိုက်တော့နော်။
Ref :Reader’s Digest, foodnetwork
လှတျပဈမိနတောတှကေမှ တကယျ့ ဗီတာမငျတှေ
အမှိုကျအိတျထဲကို မလှတျပဈရတဲ့ အစားအစာအစိတျအပိုငျး ဆိုတော့ ဘာမြားဖွဈမလဲ ယောငျးတို့ သိခငျြကွတယျဟုတျ။ အိမှနျတို့တှကေ လိမ်မျောသီးစားပွီးရငျ လိမ်မျောခှံကို လှတျပဈတယျ ၊ ကွကျသှနျနီနှာပွီးရငျ အခှံကို လှတျပဈလိုကျတယျ။ ဒါတှကေအမွဲတမျး အလအေ့ထလို ဖွဈနပွေီ။ ဆိုတော့ကား အခြိနျမနှောငျးခငျလေး သိသှားရအောငျ ဘယျလိုအစိတျအပိုငျးတှကေ အမှိုကျဆိုပွီး လှတျပဈလိုကျဖို့ မသငျ့တျောဘူး ဆိုတာကို ဝမြှေလိုကျပါတယျ။
ငှကျပြောသီးကို စားတဲ့အခါ အထဲက အသားကိုပဲစားပွီး နူးညံ့တဲ့ငှကျပြောခှံကိုတော့ လှငျ့ပဈလိုကျကွပါတယျ။ ဒါက မဟာအမှားပါပဲ။ ငှကျပြောသီးမှာက ပြျောရှငျမှုဟျောမှုနျး ဆီရိုတိုနငျ (serotonin) ကို တိုးမွှငျ့ပေးပွီး စိတျခံစားမှုနဲ့ အာရုံကွောဆိုငျရာ လှုပျရှားမှုတှေ ပုံမှနျဖွဈစတေဲ့ ထရိုငျပတိုဖနျ (tryptophan) ပါဝငျပါတယျ။ ငှကျပြောသီး smoothies ထဲကို ငှကျပြောခှံအမှညျ့ပါ ရောဖြျောသောကျပေးလို့ရသလို ငှကျပြောမုနျ့ဖုတျတဲ့အခါ အခှံပါထညျ့ပေးလို့ ရပါတယျ ယောငျးရေ။
Related article >>> ဆီးလမျးကွောငျးမကောငျးသူတှေ ဘယျလိုအစားအစာမြိုး ရှေးစားကွမလဲ?
ပူနတေဲ့ ရာသီမှာ ဖရဲသီးလေးမြား စားရမယျဆိုရငျ ရငျကို အေးခနဲ ဖွဈသှားတာပဲ။ ဖရဲသီးအသား ရဲရဲလေးကို ဖြျောရညျလုပျသောကျပွီး မွိနျရရှေကျရေ ဒီတိုငျးစားကွပမေဲ့ အခှံနဲ့ အစကေို့တော့ ဘယျသူမှ အဖတျမလုပျဘူးရယျ။ တကယျတော့ ဖရဲသီးအခှံ အစိမျးရောငျအောကျက အဖွူရောငျအတှငျးသားမှာ အမိုငျနိုအကျဆဈ စီထရူလိုငျး (citrulline) ပါဝငျလို့ သှေးလညျပတျမှု ကောငျးမှနျစတေဲ့အပွငျ ကိုယျခံအားကို မွှငျ့တငျပေးပါတယျ။ ဖရဲသီးအစကေ့တော့ မိနျးကလေးအမြားစု ကွိုကျတဲ့ ကှာစိလှျော ဖွဈသှားပွီး အပြျောစားလို့ ရတာပေါ့ ယောငျးရေ။
နာနတျသီးစားတဲ့အခါ အူတိုငျကို ယောငျပွီး လှငျ့မပဈလိုကျပါနဲ့ ယောငျးရေ။ နာနတျသီးအူတိုငျထဲမှာ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျမွောကျမွားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ နာနတျသီးတဈလုံးမှာက ပရိုတိနျးခဖြေကျြပေးတဲ့အငျဇိုငျး (bromelain) ပါဝငျတဲ့အတှကျ ရောငျရမျးမှုတှကေို သကျသာစတေဲ့ အစှမျးရှိပါတယျ။ သှေးခဲခွငျးကိုလညျး ကာကှယျ တားဆီးပေးနိုငျပါတယျ။ နာနတျသီးအူတိုငျကို အတုံးလေးတှေ တုံးထားပွီး ရထေဲထညျ့သောကျလို့ ရသလို နာနတျသီး ထမငျးကွျောထဲမှာလညျး ထညျ့ကွျောစားလို့ ရပါတယျ။
Related Article>>>အိမျရှငျမတို့အတှကျ အလုပျသကျသာစမေယျ့ ဖွတျလမျးနညျးမြား
ကွကျသှနျနီအခှံကို လှငျ့ပဈစရာ မလိုဘူးဆိုတော့ ဘယျလိုမှ မယုံနိုငျ ဖွဈနကွေတယျဟုတျ။ ကွကျသှနျနီအခှံထဲမှာ ကှာစီတငျ (quercetin) ဒွပျပေါငျးက မြားစှာပါဝငျနလေို့ ရောငျရမျးမှုကို တိုကျထုတျပေးပွီး သှေးပေါငျခြိနျ လြော့ကစြပေါတယျ။ စှပျပွုတျလုပျသောကျတဲ့အခါ ကွကျသှနျနီအသားရော အခှံပါ ရောခကျြပွီး စားခါနီးကမြှာ အခှံတှကေို ဖယျပွီးစားပေးရငျ ဆေးဘကျဝငျပါသတဲ့ ယောငျးရေ။
ကီဝီသီးစားတဲ့အခါ မကျြနှာအငယျရဆုံးက အခှံပါပဲ။ အထဲက အသားကို ဇှနျးနဲ့ ခပျစားပွီး အခှံကိုတော့ ဒီတိုငျးလှတျပဈလိုကျကွပါတယျ။ တကယျတော့ ကီဝီခှံက လိမ်မျောခှံတှလေို ဗီတာမငျ C ဓာတျမွငျ့မားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ အခှံက ကွမျးကွမျးလေး ဖွဈနတောကို မကွိုကျဘူး ဆိုရငျတော့ ကီဝီသီးတဈလုံးလုံးကို ထညျ့ဖြျောပွီး smoothie လုပျသောကျလို့ ရပါတယျ ယောငျးရေ။
ပနျးဂျေါဖီစားတဲ့အခါ အပျေါက ပှငျ့ဖတျလကျတံလေးတှပေဲ ဖွုတျပွီးစားကွပမေဲ့ အောကျကရိုးတံကွီးကိုတော့ လှတျပဈကွပါတယျ။ တကယျတော့ ရိုးတံမှာ ရောငျရမျးမှုတှကေို ပြောကျကငျးစနေိုငျတဲ့ sulforaphane ဒွပျပေါငျး ပါဝငျပွီး ဆဲလျပကျြစီးခွငျးနဲ့ သှေးကွောထဲမှာ အကြိတျလုံးဖွဈပျေါခွငျးတှကေို တားဆီးပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နောကျတဈခါ ပနျးဂျေါဖီ ကွျောစားမယျဆိုရငျ ရိုးတံလေးပါ ထညျ့ကွျောပါ ယောငျးရေ။
နံနံပငျကိုတော့ ကွိုကျတဲ့သူရှိသလို မုနျးကွသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နံနံပငျစားရတာ ကွိုကျတယျဆိုရငျတော့ နံနံပငျအမွဈတှကေိုပါ ကွိုကျသငျ့ပါတယျ ယောငျးရေ။ အမွဈမှာက အရှကျထကျကို ပရိုတိနျးဓာတျ ပိုမြားပါတယျ။ ပငျစညျမှာလညျး အာဟာရတနျဖိုး တူတူရှိပွီး ကငျဆာကို တိုကျဖကျြပေးသလို အရပွေားနဲ့ မကျြလုံးကနျြးမာရေးလညျး ကောငျးမှနျစပေါသတဲ့ ယောငျးရေ။
ကဲ..အရငျတုနျးက မသိလို့ ယောငျမှားပွီး လှတျပဈမိခဲ့မယျဆိုရငျ အခုတော့ တနျဖိုးထားပွီး အမွတျတနိုး စားသုံးလိုကျတော့နျော။
Tags: Food, food parts, garbage, Knowledge, never, throw